The Irrawaddy's Blog: မိုးဟေကို
"ပြိုင်ကား နဲ့အတူ လန်းနေတဲ့ မိုးဟေကို"
http://model.myanmarcelebrity.com/2011/12/myanmar-leading-model-moe-hay-kos-sexy.html မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။
MinAhPhay said... :
this is called ' curvy '
also called' curvacious " .
မြန်မာမိန်ကလေးတွေ သိက္ခာကျတယ်.. မိုးဟေကိုက်ရောင်းစားဘို့အတွက် ကိုယ်ကို ကြော်ငြာနေတာလား သို့မဟုတ် ကားအတွက်ကြော်ငြားနေတာလားမသိဘူးနော်...ကြည့်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မထိန်းနိုင်စရာဘဲ..
အဲဒါ China made လား...
Japan made လားဟင်...
ပလို့ဂျိ said... :
သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာမို့ မရှိလို့ အခုလို ကျော်ညာ ရိုက်စားတာပါရှင်။ အားမနာပ မပြောပါနဲ့လားနော်။ ပွင့်ပွင့်လင်းပင်းပြောကြေးဆို ဇီးကွက်စီးပွားရေးခေတ်မို့ ရှိတာလေးထုတ်ရင်းရတာပါ။ မရင်းရတာ ဘူတူများရှိလို့လည်း။ အရင်းမစိုက်လှေထိုးလိုက်ဆိုသလိုပေါ့။ ထိုးစရာလှေလည်းမရှိ၊ ထိုးလည်းမထိုးတတ်ဆိုတော့ ရှိတာရင်းရတာပါ။ သာမီးတစ်ယောက်တည်း မြန်မာပြည်မှာအခုလို ၀တ်စားနေတာမဟုတ်ရပေါင်ရှင်။ တိုရီးယားနဲ့ ခိုးကူးနိုင်ဂံဂျားခွေတွေကျေးဇူးနဲ့ မီးတို့တောင် ပလိတ်သတ်တွေဘာဝတ်သလဲဆိုတာစောင့်ကြည့် လိုက်ဝတ်နေရတာပါ။ ပြသမျှက အရိုးကထောက်ကန်ပေးထားတဲ့ အရေပြားကြီးပါ။ ဘာ အနှစ်ပါတာမှတ်လို့ အဟစ် အဟစ်။ မီးတို့က ဖျောင်ဖြေရေး အဲ ဖြောဖြေရေးတမားတွေဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရတယ်လေ။ ကြည့်ရတာ မလန်းဘူးလား ဟိဟိ။ ကြည့်တတ်ရင် ဘာဝနာ မကြည့်တာရင် တဏှာတဲ့။ ကြည့်သူအပေါ်ပဲ မူတည်တာပါနော်။ မြန်မာပြည်ကောင်မလေးတွေ ဒါမျိုးဝတ်တာတွေ့ရင် မီးတို့ကြောင့်လို့မပြောနဲ့နော်။ မီးတို့လည်းကူးထားတာ။ အဲလေတွေပွမိပြီ၊ မီးကိုအားပေးနော် နော်လို့ ။ ဒီကားလေးဝယ်စီး နော် ။အဟတ်အဟတ် အဟွတ်။ယောင်လို့ ခစ်ခစ်ခိခိခွစ်ခွစ်။
မိုးဟေကို..ကြေငြာတာနဲ့ကို ဒီကားက ၀ယ်စီးဖို့ရာ တန်နေပါပြီ...ကိုယ်လည်း မြန်မာမိန်းကလေးပါ.....ဒါပေမဲ့...ရှက်မိပါတယ်.....
မမမိုးရေကို ဒူးခေါင်းလေးဘာဖြစ်တာလဲသိဘူးနော် နာမှာပဲ အဲ့ဒူးခေါင်းလေ ဟိဟိ
ကို အပြင်မှာထွက်ဆော့တော့ခု ဒူခေါင်းပြဲပြီမဟုတ်လား။
If you look carefully for about 1 minute, you will noticeacar in these pictures... :D
MTS said... :
အပုပ်ကောင် ရုပ်ဆောင်နေတာပါ၊ ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရ၊ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်တရားတွေ၊ မတည်မြဲဘူး၊ ဒါကြောင့် မိုးဟေကို ပေါ်ရင် ပေါ်တယ် လို့ ပဲမှတ်တယ်၊ ဖော်ရင် ဖော်တယ်လို့ ပဲရှုတယ်၊ ကိလေသာတော့ ကုန်ခါနီးပြီ၊ တဏှာနဲ့ရာဂ ပဲကျန်တယ်၊
PuHtuZin said... :
Whatatomato !
she isatomato !
ကားက စည်သူတေဇကားပါ ဘယ်လိုပတ်သက်လည်းတော့သိဘူး
ဒူးတောင်ပြဲတယ်ဆိုတော့ အင်း..... .......
မမိုးဟေ ကျွန်တော်ဟာ မရဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ်တစ်ရောက်ပေါ့ ရေခြားမြေခြားမှာနေထိုင်ရတဲ့ မောင်ထွန်းထွန်းဝင်းပေါ့ မရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးတွေကိုကြီုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့် မရဲ့ ဖုံးနံပါတ်ကိုချစ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အခုချက်ချင်းပို့ ပေးပါနော် မကို ထာဝရအားပေးသော ထွန်းထွန်းဝင်း
နန်း said... :
မိုးဟေကို ကိုအရမ်းချတယ်သြော်မှားလို့ချစ်တယ်ပြောတာ ပုံအောင်ကိုကျော်
fatehero7 said... :
်မမိုးကိုအားလုံးကလှောင်နေကြတယ်သူတို့ကခေတ်အလိုက် ကိုမသိလို့ဖြစ်မှာပါအမရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့အခု ကားကြော်ငြာရိုက် ထားတာလေးကခေတ်နဲ့အညီလိုက်ဖက်ပါတယ်